Liva Andriamanantena · Oktobra 2021 · Global Voices teny Malagasy
Liva Andriamanantena · Oktobra, 2021
Mey 2022 9 Lahatsoratra
Avrily 2022 6 Lahatsoratra
Desambra 2021 8 Lahatsoratra
Oktobra 2021 10 Lahatsoratra
Aogositra 2021 8 Lahatsoratra
Mey 2021 8 Lahatsoratra
Jolay 2019 40 Lahatsoratra
Mey 2019 42 Lahatsoratra
Avrily 2019 51 Lahatsoratra
Marsa 2019 44 Lahatsoratra
Febroary 2019 44 Lahatsoratra
Janoary 2019 76 Lahatsoratra
Desambra 2018 34 Lahatsoratra
Novambra 2018 42 Lahatsoratra
Aogositra 2018 45 Lahatsoratra
Jolay 2018 50 Lahatsoratra
Jona 2018 45 Lahatsoratra
Mey 2018 38 Lahatsoratra
Marsa 2018 42 Lahatsoratra
Janoary 2018 60 Lahatsoratra
Desambra 2017 43 Lahatsoratra
Oktobra 2017 72 Lahatsoratra
Septambra 2017 52 Lahatsoratra
Aogositra 2017 71 Lahatsoratra
Jolay 2017 63 Lahatsoratra
Jona 2017 69 Lahatsoratra
Mey 2017 51 Lahatsoratra
Avrily 2017 37 Lahatsoratra
Febroary 2017 26 Lahatsoratra
Janoary 2017 29 Lahatsoratra
Desambra 2016 24 Lahatsoratra
Novambra 2016 28 Lahatsoratra
Jolay 2016 27 Lahatsoratra
Jona 2016 29 Lahatsoratra
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Marsa 2016 · 1971 Lahatsoratra
I am a passionate translator of English to Malagasy and Malagasy to English. I have been working as a freelance translator since 2016.
imailaka Liva Andriamanantena
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Oktobra, 2021
Mihevitra lalàna vaovao hanakanana ny tambajotra sosialy i Kazakhstan
Azia Afovoany sy Kaokazy 31 Oktobra 2021
Natao hanakanana ny asa ataon'ny orinasan'ny tambajotra sosialy ao Kazakhstan ny fanitsiana lalàna vaovao. Mety hanamafy ny fitsikilovana ataon'ny governemanta ilay famerana nolazaina fa natao hiarovana ny zon'ny ankizy,
Azia Afovoany sy Kaokazy 26 Oktobra 2021
Nikatona nandritra ny 10 andro ny tranonkalan'ny Hola News noho ny Fanafihana be pitsiny. Avy eo nandao ny tetikasa ny ekipa fototra, noho ny tsindry avy amin'ny manampahefana hoy izy ireo.
Azia Afovoany sy Kaokazy 24 Oktobra 2021
Nisintaka tamin'ny fifanarahana teo amin'ny governemanta sy ny mpanohitra ny antoko eo amin'ny fitondrana Georgian Dream.
Afrika Mainty 21 Oktobra 2021
Hanamora ny fifampiresahana sy ny hetsika eo amin'ny fifangaroan'ny famoronana, mpamorona, mpikatroka ary mpanentana samihafa izay miasa amin'ny Tanjon'ny Fampandrosoana Lovainjafy manerana an'i Afrika ny fetibe.
Manasongadina ny habibiana any amin'ny fonjan'ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny nosy Manus, Aostralia ny fahafatesana sy ny daroka
Oseania 19 Oktobra 2021
"Natahotra sy reraka tokoa ireo mpitsoa-ponenana ary nilaza izy ireo fa tsy nanome sakafo sy fitsaboana azy ireo ny polisy."
Azia Afovoany sy Kaokazy 14 Oktobra 2021
Hiraina amin'ny Kazakh mifangaro Rosiana, lalaovina amin'ny zavamaneno mpifindrafindra monina nentim-paharazana sy ny zavamaneno vaovao, anolotra tontolo mampientanentana sy amin'ny tontolo manankarena ny mozika hafa misy ankehitriny avy any Kazakhstan.
Boji, ilay alika mampiasa fitateram-bahoaka mitety an'i Istanbul
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 11 Oktobra 2021
Fantaro i Boji, ilay alika mpirenireny ao Istanbul izay mampiasa fitateram-bahoaka hitsangatsanganana amin'ny tanàndehibe isan'andro.
Amerika Latina 09 Oktobra 2021
"Hataoko izay hifindrana any La Cumbrecita."
Eoropa Andrefana 05 Oktobra 2021
"Te hiteny amin'ny namana mpanakanto hafa aho fa tsy tokony hitsahatra hanandrana izy ireo, tsy tokony hitsahatra hikaroka ary tsy tokony hatahotra mihitsy ny hizara ny heviny."
Fiovana amin'ny mpitantana ny Lingua frantsay!
Mediam-bahoaka 02 Oktobra 2021
Fanambarana ny fialan'i Laila Le Guen tsy ho mpitantana ny Lingua frantsay, ary i François Noverraz ho mpitantana ny fandikan-teny mpisolo toerana.